400.000 edlule ukufudumala kwembulunga yonke kwaqeda iqhwa laseGreenland | Isimo Sezulu Senethiwekhi
400.000 edlule, ukufudumala kwembulunga yonke kwaqeda iqhwa laseGreenland
Ukufudumala kwembulunga yonke kuqeda iqhwa kuyo yonke iplanethi yethu. Lokhu kunemiphumela emibi kakhulu kuyo yonke imvelo yomhlaba nasemazingeni okushisa. I-thaw iqhubekela phambili ngokuxhuma futhi ibangela ukuthi i-ice sheet yaseGreenland inyamalale.
Uphenyo olwenziwe yiComplutense University of Madrid (UCM) luveze ukuthi eminyakeni ebalelwa ku-400.000 edlule bekukhona ukufudumala kwembulunga yonke okufana nokwamanje nokuthi kwadala ukuthi icwecwe laseGreenland licishe lanyamalala ngokuphelele. Ingabe okufanayo kuzokwenzeka namuhla?
Lolu cwaningo luthole ukuba khona kwe-thaw ecishe yabangela ukunyamalala kwengubo yonke yaseGreenland. Ukuthola ukuthi ukushisa okufanayo kungadala umonakalo ofanayo namuhla, sSenze kabusha izimo zezulu zesifunda sisebenzisa imodeli yeqhwa yesimo sezulu ehlanganisiwe.
Lapho inqubo yokuncibilikisa iqala, kunzima kakhulu ukuyimisa. Esikhathini sokufudumala kwembulunga yangaphambilini okwahlupheka nguMhlaba, kwathatha iminyaka eyizinkulungwane ezimbalwa ukuthi ukuncibilika kubaluleke kakhulu. Kodwa-ke, namuhla, ukufudumala kwembulunga yonke yethu kwenzeka emakhulwini eminyaka ambalwa nje (selokhu kwaba nezinguquko ezimbonini).
Le modeli iphinde yavuselela kabusha okokuqala amandla eqhwa analo maqondana nesimo sezulu esivele sikhona eGreenland ngesikhathi sezinhlanga ezahlukene. Kuyasiza ukwazi okwedlule kwalokhu kufudumala kwembulunga yonke ukuze sikwazi ukwenza njengamanje, uma kubhekwa ukuthi amazinga okushisa abephakeme kancane kunanamuhla nokuphakama komhlaba wonke kwezilwandle lifike ezingeni eliphakathi kwamamitha ayi-6 no-13 ngaphezu kwaleli lamanje.
Kufanele ucabange ukuthi uma ukufudumala kwembulunga yonke nokunyamalala kwamaqhwa eGreenland kwenzeka eminyakeni engama-400.000 eyedlule futhi ngaphandle kwemisebenzi yezimboni, kuyacaca ukuthi lokhu kungenzeka futhi. Isiphetho esikhulu ukuthi ingubo yaseGreenland iyazwela ekuguqukeni okuncane kwesimo sezulu, futhi uma ukuncibilika kwayo kwenzeka eminyakeni engaphezu kwezinkulungwane ezingamakhulu amane edlule, kungenzeka kwenzeke futhi.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Isimo sezulu » Ukuguquka kwesimo sezulu » 400.000 edlule, ukufudumala kwembulunga yonke kwaqeda iqhwa laseGreenland
UJuni ubenzelwe iNhlonhlo Yase-Iberia, okugxilwe kukho konke emazingeni okushisa aphezulu
Ukukhuphuka kwamazinga okushisa kuzonciphisa ukusebenza kwezindiza